News | पानी
News | Tag: पानी
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनुको असर शरीरिक रुपबाट मात्र नभई मानसिक रुपमा पनि पर्छ । जर्नल अफ न्युट्रिसन मा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा मानिस झोक्किने , रिसाउने, अल्छि हुँने, काममा केन्द्रीत हुन नसक्ने र दुखी रहने गरेको पाइएको छ ।
कसरी र कति पिउने पानी ?
– पानी हाम्रो शरीरको अत्यावश्यक पादर्थ हो । पानीको कमीले धेरै स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ ।
सँधै यसरी पानी पिउने गर्दा राम्रो
एजेन्सी । पानी कति मात्रामा पिउनुपर्छ त्यो व्यक्तिमा निर्भर रहने गर्दछ । तापनि एक स्वस्थ मृगौला भएको व्यक्तिले दिनभरमा दुई देखि साढे दुई लिटर पानी पिउनुपर्छ । पानीलाई अनुकुल मिलाई पिउन सकेमा यसले थुप्रै रोग लाग्न समेत दिँदैन । तसर्थ पानी पिउने तरिका पनि जान्नु जरुरी छ ।
शरीरमा पानीको कमी हुँदा यस्ता समस्या ?
शरीरमा पानीको कमी भयो भने हरेक अंगमा यसको असर पर्छ । पानीको कमीले छाला सुख्खा हुने, चाउरी पर्ने, पिसाब, किड्नीमा समस्या देखिने हुन्छ ।
पानी पिउँदा मात्रा मिलाउनुपर्छ !
– हामी तिर्खा लागेको समयमा एकै पटक अत्यधिक पानी पिउने गर्छौं । कुनै–कुनै दिन पानी नखाई बस्छौं । यस्तो बानीले स्वास्थ्यमा असर पु–याउँछ ।
पानी पिएर मात्र हुँदैन, पिउने उपाय पनि जान्नुपर्छ !
डोको र नाम्लोको भरमा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्याता
पाल्पा । सरकारले एक घर एक धाराको नीति ल्याएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा डोको र नाम्लोको भरमा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।
चाउरीपन र सुक्खापनबाट बच्न पानी पिउने !
काठमाडौं । पानी मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक छ । पानीविना शरीरका कुनै पनि अंग बाँच्न सक्दैन । स्वस्थ जीवनका लागि दैनिक पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन जरुरी हुन्छ । पानीले थुप्रै रोगबाट त बचाउँछ नै, छालाको समस्या पनि समाधान गर्छ ।
बिहानै खाली पेटमा पानी पिउनुका ५ फाइदा
काठमाडौँ । मानव जीवनका पानीको अति नै महत्वपूर्ण छ । पानी बिनाको जीवन सम्भव छैन् । जन्म देखि मृत्यु पर्यन्त हामी पानी सेवन गरिनै रहेका हुन्छौं, कुरा यति हो कसैले धेरै त कसैले कम । हामी पानी त खान्छौं तर, विहान खाली पेट खाँदा निकै फाइदाजनक हुन्छ । खाली पेट पानी पिउँदा हाम्रो शरिरमा भएको टक्सिन सफा भई रगत शुद्ध बनाउँछ । बिहानै ४ गिलास पानी पिउन सके हामीलाई तन्दुरुस्ती प्राप्त हुन्छ । तपाई बिहानै यति धेरै पानी पिउन सक्नु हुन्न भने दैनिक १ गिलासबाट शुरु गर्नुहोस् र मात्रा बढाउँदै लैजानुस् ।
इतिहास बन्याे कुलाे प्रणाली, घट्याे पानीकाे मूल
नुवाकोट । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकास्थित सिलामेमा १५/२० वर्ष अघि कुलो खनेर हिउँदमा गहुँ र तोरी लगाइन्थ्यो । स्थानीय नवराज अधिकारीलाई अहिले उक्त खेती प्रणाली इतिहास बनेको छ ।